Apple's HomePods soo socda ayaa keeni kara shaashadaha iyo kaamirooyinka | Waxaan ka socdaa mac
Apple's HomePods soo socda ayaa keeni kara shaashado iyo kaamirooyin
Marka Apple kaliya ka saar asalka HomePod waana la ogaadey in moodooyinka yaryar ay keenaan qoyaan iyo dareemayaal heerkul ah laakiin aan weli la hawl gelin, waxaan sidoo kale helnaa wararka ku saabsan walxaha cusub ee ay doonayaan inay ku daraan qalabka. Sidan ayaan uga hadalnaa suurtagalnimada in aaladahaas ku hadla guriga ay awoodaan ku dar shaashadaha iyo kaamirooyinka. Maaha wax horumar ah, maxaa yeelay waxaan horey u ognahay in moodooyinka tartamaya ay durba leeyihiin astaamahan Apple-na ay goor hore soo daahday. Laakiin si ka fiican sidii hore ayaan uga daahay.
Warka cusub ee laga helay Apple, markan waxa loola jeedaa HomePod mana aha hal war haddii aan ahayn mustaqbalka dhow waxaan arki karnaa qalab gebi ahaanba cusub oo cusbooneysiiyay. Sidan ayaan ku ogaan karnaa in muddada gaaban HomePod ay ku jiri karaan astaamo cusub oo waxtar u yeelan lahaa. Haatan waxaan haynaa warka ah in la ogaaday tan HomePod mini waxaan leenahay dareemayaal heer kul taas lama dhaqaajin iyo inay u badan tahay taas waxaa lagu bilaabi karaa barnaamijka softiweerka.
Marka lagu daro dareemayaashaan la helay, waxaan ku heynaa aragti ah inay ku dari karaan shaashadaha iyo kamaradaha. The warbixin cusub oo Bloomberg ah waxay soo jeedineysaa in Apple ay ugu yaraan sahmin karto fikradda moodooyinka cusub ee HomePod oo leh shaashad iyo kamarad. Si aad awood ugu yeelatid inaad la tartantid Google's Nest Hub Max, Amazon's Echo Show iyo bogga Facebook. Gurman wuxuu ka digayaa «daahfurka ma dhawa«, Marka wax damaanad ah ma leh in Apple ay soo saari doonto wax soo saarkan oo kale. Markaa waxaan ka filan karnaa aaladahaan muddada fog in ka gaaban ama kuwa dhexdhexaadka ah.
Qalabka kamaradaha ku shaqeeya ee 'HomePod' ee Apple ayaa si macquul ah u soo bandhigi doona waxyaabo la mid ah sida Wicitaanka fiidiyowga FaceTime iyo isdhexgalka HomeKit haddii ay waligeed suuqa ku dhacdo. Way fiicnaan laheyd in lagu arko waxyar oo kafiican qaadashada waqti dheer. Sababtoo ah shirkadda Mareykanka ma ahan inay iska indhatirto tartamayaasheeda kuwaas oo horeyba moodooyin ugu haystay suuqa oo hubiyey inay mustaqbalka noqon doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple's HomePods soo socda ayaa keeni kara shaashado iyo kaamirooyin
Khalad aan aad u baahnayn ayaa ka soo baxaya barnaamijka YouTube-ka ee Apple TV
Ulysses waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 22 iyadoo leh horumarin cusub oo ku saabsan daabacaadda khadka tooska ah